🥇 ▷ OnePlus: Cusboonaysiinta Android 10 ee OnePlus 7 iyo OnePlus 7 Pro ayaa diyaar ah ✅
OnePlus: Cusboonaysiinta Android 10 ee OnePlus 7 iyo OnePlus 7 Pro ayaa diyaar ah
Kadib taleefanka Google Pixel iyo Aasaasiga ah, cusboonaysiinta Android 10 ayaa sidoo kale hadda diyaar u ah OnePlus 7 iyo OnePlus 7 Pro. Tani waxay firfircoontahay hawlo cusub sida xakamaynta dhaqdhaqaaqa, soo bandhigida caqliga leh iyo xuquuqaha helitaanka la dheereeyay.
(c) Google / Android @Instagram
OnePlus waa mid ka mid ah soosaarayaasha ugu kalsoonida badan ee ugu dhaqsaha badan ee loogu talagalay bixinta casriyeynta amniga Android iyo noocyo cusub oo nidaamka hawlgalka ah. Sidaas ayay hadda ku sii socotaa barnaamijka cusub ee cusub ee loo yaqaan ‘Android 10’. Cusboonaysiinta ayaa la helay ilaa bilowgii Sebtember ilaa iyo hadda kaliya aaladaha Google Pixel iyo Telefoonka Muhiimka ah ayaa helay nooca cusub. OnePlus waxay soo saartay beta 10-kii ugu horreeyay ee aaladooda isla markiiba sanduuqa, oo hadda cusboonaysiinta ayaa deggan oo ku filan in laga soo dejiyo dhammaan taleefannada casriga ah iyada oo loo marayo casriyeynta hawada sare (OTA). Marka hore, kaliya adeegsadayaasha ugu dambeeyay OnePlus 7 iyo OnePlus 7 Pro ayaa heli doona cusboonaysiinta, aaladaha kale muddo yar kadib ayey raaci doonaan. Macluumaad dheeri ah ayaa laga heli doonaa munaasabada furitaanka ee OnePlus 7T iyo OnePlus 7T Pro oo London ka dhici doonta 10-ka Oktoobar.
Cusboonaysiinta cusub ayaa ah sida OxygenOS 10.0 oo dabcan waxay keentaa Xaaladda Madowga iyo xakamaynta ficil-celinta ee Android 10, laakiin sidoo kale qaar ka mid ah astaamaha u gaarka ah. Halkan ka aqri qoraalka isbadalka oo dhameystiran:
Kordhinta Android 10
Naqshad cusub oo UI ah
Dejinta asturnaanta sare ee rukhsadaha goobta
Tilmaamo cusub oo isbeheyn ah ee Xulashada ee kuu oggolaaneysa inaad xulato qaababka icon ee aad rabto inaad ku aragto Muuqaallada Degdegga ah
Calaamadaha muuqaalka buuxa ee shaashadda
Cilmiga dhabarku wuxuu ka kooban yahay ka boodida bidix ama geeska shaashadda ilaa xarunta
Baar dheeri ah oo dheeri ah oo loogu talagay u rogida barnaamijyada hada jira bidix ama midig
Muuqaalka cusub ee ‘Game Space Game’ wuxuu isu keenayaa dhammaan kulamada aad ugu jeceshahay hal meel si loo fududeeyo marin u helka iyo kor u qaadista khibradaha ciyaarta
Waxay taageertaa astaamaha caqliga leh ee ku saleysan waqtiga, goobta iyo munaasabadaha (Dejinta – Bandhigida – Bandhiga Ambient – Soo Bandhigida Smart)
Farriimaha Spam waa la xakameyn karaa iyadoo la adeegsanayo ereyada furaha (SMS / MMS – Meelaha Spam – Meelaha xannibaadda)
Cusboonaysiinta ayaa laga yaabaa inaanu isla markiiba la heli karin, laakiin adeegsadayaasha qaarkood ayaa laga yaabaa inay hore nasiib u yeesheen. Soo-saareyaasha kale, waxay qaadan kartaa xoogaa waqti ah ilaa inta 10 laga helayo Android 10. Rumor ayaa leh in wajiga beta ee Android 10 ee Samsung uu bilaaban doono bisha Oktoobar.
Inbadan oo ku saabsan: Cusboonaysiinta Android, taleefannada casriga ah ee casriga ah, taleefannada casriga ah ee Android, nooca Android, Cusboonaysiinta Android, Google Pixel, Android, flagship Android, Android 10